सेरोफेरो : December 2016
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाट शाखामा (नारायणहिटीको उत्तर ढोका तर्फ) पैसा जम्मा गर्न केहि दिन अघि पुगेको थिएँ। सोच्नुहोस् त, हरेक बैंकमा पुग्ने बित्तिकै डिपोजिट फर्म भर्नु अघि तपाईलाई के कुराको हतार हुन्छ ? हो मलाई पनि त्यही कुराको हतार भयो, पालो लाग्ने नम्बरको लागि कुपन लिने। यता खोज्छु छैन, उता खोज्छु छैन। ‘छैन हो, लाइनमै बस्नु पर्छ’ गार्डले नै यसो भनेपछि मैले लाइन तिर हेरेँ। पुरै लामो छ त।
बेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्स लन्डनद्वारा इन्भेष्टमेन्टलाई यो वर्षको सर्वोकृष्ट नेपाली बैंक घोषणा गरेको हो। अर्को कुरो सुन्नुहुन्छ ? यो सहित यस बैंकले यहि अवार्ड पाँचौ पटक हात पारिसकेको छ। छैन त रमाइलो?
हुन त बैंकको यो शाखामा कुनाकाप्चा तिर बस्नको राम्रो व्यवस्था नभएको हैन। तर तपाई जस्तो हट्टाकट्टालाई कुनामा बसेर मेरो लाईन त्यहाँ छ है भन्न कहाँ सुहाउँछ र हैन ? छन त यहाँ कोठा पनि निक्कै चाक्लो छ, ठूलै फुटसल ग्राउण्ड जत्रै। अनलाइन सेवा चलाउने बैंकले नम्बर ओकल्ने एउटा डिजिटल मेसिन राखिदिएको भए, दुई चार कुर्चि थपिदिएको भए उभिने धेरैले राहत पाउँथे कि ? नरिसाउँनु ल तपाईको आफ्नै बैंक पर्‍यो भने। के गर्ने सेवाग्राही न परेँ, छुच्चो मुख त गर्नै पर्‍यो नि हैन ? फर्कनु अघि सानो गुनासो कसलाई भनौं भनौं भयो। हिड्ने बेलामा त्यहाँको एक कर्मचारीलाई नै भनेँ, ‘हजुरकहाँ पालो लाउँने डिजिटल मेसिन छैन भन्या ? २५ मिनेट ठाडै उभिन पर्‍यो ?,’ उनले पनि आफै दुखि भएझै गरे, ‘के गर्नु सर यहाँको म्यानेज्मेन्ट नै यस्तै छ।’
सेतोपाटीमा प्रकाशित ।